Bible Mu Nsɛm Yesu Ma Nnipa Pii Aduan - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
ASƐM bɔne bi asi. Wɔakum Yohane Osuboni no. Ná Herodia a ɔyɛ ɔhene no yere mpɛ n’asɛm. Na otumi yɛ maa ɔhene no ma wotwaa Yohane ti.
Bere a Yesu tee no, ne werɛ howee. Ɔkɔhyɛɛ baabi komm. Nanso nkurɔfo no dii n’akyi. Bere a Yesu huu nnipa dɔm no, ne yam hyehyee no maa wɔn. Enti ɔkaa Onyankopɔn ahenni no ho asɛm kyerɛɛ wɔn na ɔsaa wɔn ayarefo yare.
Saa anwummere no n’asuafo bɛka kyerɛɛ no sɛ: ‘Ade resa, na ɛha nso yɛ sare so. Ma nkurɔfo no nkɔ na wɔatumi akɔtɔ aduan adi wɔ nkuraa a ɛbemmɛn ha no ase.’
Yesu buae sɛ: ‘Ɛho nhia sɛ wɔkɔ. Mo ara momma wɔn biribi nni.’ Ɔdan hwɛɛ Filipo no Yesu bisae sɛ: ‘Ɛhe na yebenya aduan a ɛbɛso nnipa yi nyinaa atɔ?’
Filipo buae sɛ: ‘Aduan a yɛbɛtɔ ma nnipa a wɔwɔ ha no mu biara anya kakraa bi pɛ mpo adi no bo bɛkɔ soro papaapa.’ Andrea kae sɛ: ‘Abofra a ɔso yɛn aduan no wɔ abodoo anum ne mpataa abien. Nanso ɛrenso nnipa yi nyinaa baabiara.’
Yesu kae sɛ: ‘Ma nkurɔfo no nyinaa ntratra sare no so.’ Afei ɔdaa Onyankopɔn ase wɔ aduan no ho, na ofii ase bubuu mu. Na asuafo no de abodoo ne mpataa no maa nkurɔfo no nyinaa. Ná mmarima 5,000 wɔ hɔ, ne mmea ne mmofra mpempem pii. Wɔn nyinaa didi mee. Na bere a asuafo no boaboaa nea ɛkae no ano no, wonyaa nkɛntɛn 12!
Afei Yesu maa n’asuafo no traa hyɛmma mu na wɔde atwa Galilea Po no. Anadwo no mframa kɛse bi tui, na asorɔkye no wosow hyɛmma no. Ehu kaa asuafo no. Na ɔdasu mu no, wohui sɛ obi nam nsu no so reba wɔn nkyɛn. Wɔde ehu teɛteɛɛm efisɛ na wonnim dekode a wɔrehu no.
Yesu kae sɛ: ‘Munnsuro. Ɛyɛ me!’ Na wontumi nnye nni. Enti Petro kae sɛ: ‘Sɛ wo ampa a, ka ma mennantew nsu no ani mmra wo nkyɛn.’ Yesu buae sɛ: ‘Bra!’ Na Petro fii adi nantew nsu no ani! Afei ehu kaa no na ofii ase sɛ ɔremem, nanso Yesu gyee no.
Akyiri yi, Yesu maa nnipa mpempem aduan bio. Saa bere yi de ɔde abodoo ason ne mpataa kakraa bi. Na ɛha nso obiara didi mee. So sɛnea Yesu boa afoforo no nyɛ nwonwa? Bere a obedi tumi sɛ ɔhene a Onyankopɔn apaw no no, ɛho renhia sɛ yɛhaw yɛn ho wɔ biribiara ho!
Mateo 14:1-32; 15:29-38; Yohane 6:1-21.
Asɛm bɔne bɛn na ɛtoo Yohane Osuboni, na ɛmaa Yesu tee nka dɛn?
Ɔkwan bɛn so na Yesu maa nnipadɔm a wodi n’akyi no aduan, na aduan ahe na ɛkae?
Dɛn na ɛmaa ehu kaa asuafo no anadwo no, na dɛn na ɛtoo Petro?
Ɔkwan bɛn so na Yesu maa nnipa mpempem aduan ne mprenu so?
Adɛn nti na ɛbɛyɛ anigye bere a Yesu di asase so sɛ Onyankopɔn Hene no?
Kenkan Mateo 14:1-32.
Dɛn na kyerɛwtohɔ a ɛwɔ Mateo 14:23-32 no ma yehu wɔ Petro suban ho?
Ɔkwan bɛn so na kyerɛwtohɔ a ɛwɔ Kyerɛwsɛm mu no da no adi sɛ Petro ho kokwawee ma odii n’ahopere su no so? (Mat. 14:27-30; Yoh. 18:10; 21:7; Aso. 2:14, 37-40; 1 Pet. 5:6, 10)
Kenkan Mateo 15:29-38.
Ɔkwan bɛn so na Yesu kyerɛɛ honam fam nneɛma a N’agya de maa no ho anisɔ? (Mat. 15:37; Yoh. 6:12; Kol. 3:15)
Kenkan Yohane 6:1-21.
Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ bɛyɛ dɛn atumi adi Yesu nhwɛso a ɛfa nniso ho no akyi? (Yoh. 6:15; Mat. 22:21; Rom. 12:2; 13:1-4)